Beach soccer – «Can 2016» : resin’ny Barea tany aminy i Mozambika (NewsMada) | AEMW
Beach soccer – «Can 2016» : resin’ny Barea tany aminy i Mozambika (NewsMada)
Tsara fanombohana ny Barea de Madagascar, eo amin’ny fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2016), taranja beach soccer. Lavon’ny ekipam-pirenena malagasy mantsy ny Mambas avy any Mozambika.
Niondrika teo anatrehan’ny Barea de Madagascar, tamin’ny isa 3 noho 2 ny Les Mambas-n’i Mozambika, teo amin’ny lalao mandroso amin’ny fifanintsanana hiadian-toerana amin’ny Can 2016, taranja baolina kitra lalaovina ambony torapasika (beach soccer). Resin’ny Malagasy teo amin’ny kianja filalaovany, tao Maputo ry zareo Mozambikanina, omaly alahady.
Mbola noporofoin’ny Barea de Madagascar ny maha tompondakan’i Afrika azy ireo, eo amin’ity taranja ity. Nanantombo teo amin’ny traikefa ananany ry Tiana (Tsiliva) sy ry Flavien (Dada) ary Toky, niampy an’i Pierralit sy ny fahaiza-manaon’i Jhorialy, mpiandry tsatoby.
Raha ny fizotran’ny lalao, nanantombo teo amin’ny tanjaka ny mpilalao malagasy ary betsaka ny baolina tokony ho tafiditra saingy nahay ny mpiandry tsatobin-dry zareo Mozambikanina. Nitsapa ireo mpilalao vaovao ihany koa tamin’ity, i Solofo mpanazatra ny Barea de Madagascar.
Efa manana tombon’isa iray izany ny Barea de Madagascar, hatreto. Tsy ampy anefa izany fa mbola mila fandresena ihany amin’ny lalao miverina hatao eto Madagasikara, ny 17 septambra ho avy izao. Manana fotoana tsara izany ny mpanazatra malagasy, hanitsy ny lesoka rehetra tamin’iny lalao mandroso iny.
Nandresy toa izany koa i Sénégal nanoloana an’i Cap Vert, tamin’ny isa 7 noho 2.
Marihina fa raha tafita eo ny Barea de Madagascar dia tafakatra hiatrika ny “Can 2016”, tanterahina any Lagos, Nizeria izay hatao ny 13 ka hatramin’ny 18 desambra ho avy izao.
← Rugby – «Can 1B Junior 2016» : tompondakan’i Afrika ny Makis de Madagascar (NewsMada)
«Sport scolaire 2016» : gidragidra no niafaran’ny baolina kitra (NewsMada) →